March 2020 – Gulled Salah
Gudoomiyaha Guddiga oo shaaciyay liiska iyo magacyada ururadii isdiiwaangaliyay.
Gudoomiyaha Guddiga oo shaaciyay liiska iyo magacyada ururadii isdiiwaangaliyay. Read More »
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyinka Puntland oo ka qayb galay shirka wadatashiga Puntland.
Gudoomiyaha Guddiga KMG doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre, oo qayb ka ahaa kulankii wadatashiga Puntland ayaa bulshada usheegay in hanaanka axsaabta badan in lagaaro ay kamid ahayd axdi qarameedkii Puntland lagu asaasay, haddana la gaaray xilligii la hirgalin lahaa. Wuxuu kale oo uu sheegay Guddoomiyuhu in doorasho qof iyo cod ah oo heer Golayaasha Deegaanka …
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyinka Puntland oo ka qayb galay shirka wadatashiga Puntland. Read More »
Sawiradii 6- diiwaangalinta urarada siyaasada Puntland.
Wali waxaa ka socda xarunta dhexe ee Guddiga KMG doorashooyinka Puntland diiwaan galinta ururada siyaasadda oo muddo kooban ka hartay waqtigii loo qabtay oo ah 15 March 2020, 05:00 Galabnimo. https://www.facebook.com/TPECPuntland CodkaaguWaaXaqaaga CodkaaguWaaMustaqbalkaaga.
Sawiradii 3aad – diiwaangalinta urarada siyaasada Puntland.
Waxa si habsami leh uga socda xarunta dhexe ee Guddiga doorashooyinka Puntland diiwaan galinta ururada siyaasada Puntland oo soo bilaamatay 15 December 2019 kuna eg 15 march 2020 oo inaga xigto 3 bari oo qura. https://www.facebook.com/TPECPuntland CodkaaguWaaXaqaaga CodkaaguWaaMustaqbalkaaga.
Sawiradii 4aad – diiwaangalinta urarada siyaasada Puntland.
Wali waxaa ka socda xarunta dhexe ee Guddiga KMG doorashooyinka Puntland diiwaan galinta ururada siyaasada oo soo bilaamatay 15 December 2019 kuna eg 15 march 2020 oo inaga xigaan 3 bari oo qura.Waxaa galabta codsiga diiwaan galinta ururada soo gudbiyay qaar kamida siyaasiyiinta Puntland. https://www.facebook.com/TPECPuntland CodkaaguWaaXaqaaga CodkaaguWaaMustaqbalkaaga.
Sawiradii 1aad – diiwaangalinta urarada siyaasada Puntland.